Waterproof Chipboard - China Weifang Sea Joy Trade
HPL / High chakatsindirwa laminate papepa
Ukanyatsotarisisa Faced Chipboard
PARTICIPLE bhodhi rinoshandiswa chaizvo fenicha uye zvokunyaradza kushongedzwa. With ehupfumi dzakanaka, dzakadai, nyore fabricability, mukuru vakafugama simba, simba sikuruwa vakabata kugona, kupisa nemishonga, Anti-kunofambira mberi,-refu refu uye hapana mumwaka maturo.
Product Name Waterproof Chipboard -Plain Chipboard, Melamine Faced kana ukanyatsotarisisa Atarisana Chipboard
zera 1220mm * 2440mm (4'x8 ') kana customized saizi.
ukobvu Kugamuchira <+ - 0.2mm
Face / Back pachena, melamine bepa kana ukanyatsotarisisa
akadai: Maple, sapele, nemipaini, dota, nomuapuri, Beech, Cherry, Teak, walnuts, wenge, pomuouki, shangu, etc.
akadai: chena, wachena, zvitema, girini, vatema , tsvuku, orenji, pink, yellow, etc.
ukanyatsotarisisa Species Birch, mahogany, dota, sapele, walnuts, Teak, pomuouki, Maple, Beech, Cherry, ruva dzvuku, etc..
ukanyatsotarisisa Grade A, AA kana AAA
Batana Type Single-Faced, Double-Faced
pamusoro Treatment Matt, Weiß, Texture, Wood nekusimbisa, nebefu, anovaima, etc.
Core Material Poplar, michero yemiti, nemipaini kana kusanganisa huni Chips
guruu MR, WBP, Melamine guruu
mwando Content 5% -10%
Formaldehyde womumwe Standards E0 / E1 / E2
Usage & Performance PARTICIPLE bhodhi rinoshandiswa chaizvo fenicha uye zvokunyaradza kushongedzwa. With ehupfumi dzakanaka, dzakadai, nyore fabricability, mukuru vakafugama simba, simba sikuruwa vakabata kugona, kupisa nemishonga, Anti-kunofambira mberi,-refu refu uye hapana mumwaka maturo.
chiputiriso Standard Export nhovo Packaging - nokukurumidza uye yakachengeteka vapinze pasi, pamwe mari shoma basa mhosva, asi zvishoma kwazvo panguva imwe chete.
Loose Packaging - Aizogona Takudzai zvakawanda kwazvo pamusoro chete zvacho, asi mari yakawanda basa mhosva vapinze pasi.
Supply Mano 20000 cubic metres / mwedzi
Payment Terms 30% T / T dhipoziti pamberi kugadzirwa nokudzikama pamusoro kopi B / LL / C.
Delivery Time Mukati memazuva 15 pashure pokugamuchira mubhangi kana yepakutanga L / C pa kuona
kutaura kuti ichokwadi ISO9001: 2000, CE, CARB, FSC, p2
Nevakawanda rakaiswa mune midziyo. Kitchen makabhati, Office dhesiki, emadziro moldings, dzokudyira rinovira, mukati musuo.
1. Kuita Furniture
Furniture kuti kutengwa anogona kushandisa dzakasiyana-siyana fiberboard uye zvakasikwa milled huni. The chete Kutarira zvinogona kuitwa nezvinhu PARTICIPLE bhodhi uye akawanda zvikuru fanicha makambani aiva mukuru
kubudirira kurishandisa nezvinoiswa dzavo huru.
The chinetso ndechokuti kushandisa PARTICIPLE bhodhi nyaya uye chaiyo huni zviso. Izvi zvinoitawo kuti zvakarurama chipa cabinet uye anoita PARTICIPLE pepuranga yakakurumbira chigadzirwa iri indasitiri.
3. Home dzokuAustralia
The rinofarirwa kupfuura nzvimbo dzokuAustralia dzakaripoteredza pamahwindo, nemikova, uriri uye sirin'i muchimiro Trim uye kuumbwa. zvinhu izvi zvinoitwa isingadhuri kana izvo zvinosikwa kubva PARTICIPLE bhodhi. PARTICIPLE bhodhi iri
nyore kuisa uye kunyange nyore pendi.
PARTICIPLE bhodhi kazhinji harishandiswi sechinhu chikuru flooring asi inowanzoshandiswa kufukidza hardwood mapuriro kuti vari vatovapo mumusha.
1) High vachikotama simba
2) shoma Linear kuwedzera coefficient
3) Strong chipikiri kunhaka
4) mwando uchapupu uye basa nyore
5) Tight kuvaka uye yakakwirira simba
6) Hapana ratten kana kuora
7) Low formaldehyde achine
1.Your wobvunzisisa chokuita chigadzirwa & mutengo kwedu akapindura mukati 24hours.
2. Free mharidzo zviripo.
3. Vashandi Zvakanaka-vakadzidzira & ruzivo vanofanira kupindura anobvunza zvenyu zvose muna Chirungu Chokwadi.
4. Detailed yepamusoro kudzora hurongwa.
5. Itai tsika Clearance gwaro maererano vatengi racho.
6. Muzvitsaurirei chigadzirwa indasitiri yokurera for free, vanokurudzira zvinhu uye negadziriso maererano vatengi 'mamiriro ezvinhu chaiwoiwo.
7.Provide vakasununguka mbirikira zvokuvakisa vatengi 'vanozivikanwa kudhinda uye kukwidziridzwa.
8 .. Your bhizimisi ukama nesu achava zvakavanzika chero pati rechitatu.
9. Good pashure-sale basa sechibayiro, tapota ibva shure kana ukaenda mubvunzo.
10. Tine zvinopa vakasununguka mabasa muna China kune kwenguva vatengi, akadai Réservation hotels, vatungamiriri, rubatsiro rokutenga, vachiongorora mamwe makambani 'ruzivo, uye vachitsvaka unhu vanotengesa zvimwe zvigadzirwa.
Q1: Ko boka rako riri fekitari kana kutengesa kambani?
A1: Tiri fekitari nenyanzvi, rinogona chigadzirwa kwauri yakagadzikana unhu dzose nguva.
Q2: Chii muripo izwi?
A2: 30% T / T dhipoziti pakutanga, 70% mwero mari pamberi zvacho. 100% zvizere mubhadharo pakutanga kuti mharidzo murayiro.
Q3: Ndezvipi muripo zvenyu nzira?
Q4: Tinobvuma T / T, Alipay, L / C, PayPal kubudikidza kadhi
Q4: How zvikuru kuti kutumirwa mutengo?
A4: Tapota mazano isu wako kero kana kuenda pachiteshi, isu achasarudza yakanakisisa kutakurirwa. Uye kwamuri bhajeti maererano uwandu.
Q5: Chii MOQ?
A5: Our MOQ ndiye 1 nhovo. No MOQ kuti mharidzo murayiro.
Chero mibvunzo kufadza mashoko kana uchinditi. Zviri yangu mufaro kushanda nemi.
taura kwatiri: Telephone: 0086-536-5605673; mail: joyseawf@126.com; Telephone: 0086-13395366556
Previous: Ukanyatsotarisisa Faced Chipboard
chinoshamisira vakasangana plywood